daniel | | EDenmark
La Izibane zasemaNtla eDenmark ngumbono wendalo otsala amawaka abatyeleli minyaka le. Izibane ezimibalabala ezimangalisayo ezikhukula isibhakabhaka sazo ziyafana nakwamanye amazwe aseScandinavia anjengeNorway, iSweden okanye iFinland. Nangona kunjalo, abaninzi bakholelwa ukuba izibane ezinokubonwa esibhakabhakeni saseDenmark zihle kakhulu.
Nangona kunjalo, lo mmangaliso awubonwa yonke imihla. Izibane zasemaNtla eDenmark zibonakala kuphela ngexesha elithile lonyaka kwaye ingeyiyo yonke imihla, njengoko ukubonakala kwazo kuxhomekeke. Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo lokuya eDenmark kwaye ube nakho ukonwabela lo mmangaliso, uya kuthatha umbono ongasoze uwulibale.
1 Yintoni ukukhanya kwelanga?
2 Uzibona nini izibane zaseMantla eDenmark?
3 Iindawo zokujonga ukukhanya kweNyakatho eDenmark
4 Ungazifota njani iZibane zaseMantla
Yintoni ukukhanya kwelanga?
I-aurora borealis (ekwabizwa ngokuba yi-polar aurora) yinto eyahlukileyo yomoya ozibonakalisa ngohlobo lwe Ukukhanya okanye isibane esibhakabhakeni ebusuku. Kwi-hemisphere esemazantsi yaziwa njenge-aurora esemazantsi.
Kumaxesha amandulo kwakukholelwa ukuba ezi zibane zimangalisayo zivela ezulwini. E-China, umzekelo, babebizwa ngokuba "ziidragons zezulu." Kuphela ukususela ngenkulungwane elinesixhenxe waqalisa ukufunda lo mkhuba ngokwembono yenzululwazi. Sinetyala elithi "aurora borealis" kwisayensi yeenkwenkwezi yaseFrance UPierre Gassendi. Kwinkulungwane kamva, owokuqala ukudibanisa imeko kunye nomhlaba womazibuthe womhlaba yayiyi-Bhritane UEdmund halley (ikwangula ubala i-orbit ye-Halley's comet).
Izibane zaseMantla eDenmark
Namhlanje siyazi ukuba izibane zasemNtla zenzeka xa kukhutshwa amasuntswana elanga ahlawuliswayo magnetosphere yomhlaba, uhlobo lokhuselo olujikeleze iplanethi ngohlobo lwamandla kazibuthe kuzo zombini iipali. Ukungqubana phakathi kwamasuntswana erhasi emoyeni kunye namasuntswana ahlaselwe yimitha yelanga kubangela ukuba bakhuphe amandla kwaye bakhuphe ukukhanya. Oku kuyila imibala eluhlaza edlamkileyo, epinki, bhlowu nemfusa ukudanisa esibhakabhakeni Oku "kuphazamiseka" kwenzeka kwiindawo eziphakamileyo ezisusela kwi-100 ukuya kwi-500 yeekhilomitha ngaphezulu komhlaba.
Uzibona nini izibane zaseMantla eDenmark?
Nangona zenzeka unyaka wonke, izibane zasemNtla zibonakala ngamaxesha athile. Elona xesha lilungileyo lokujonga ukukhanya kweMantla eDenmark phakathi kwenyanga ka-Epreli noSeptemba. Ngeli xesha lonyaka, i-hemisphere esemantla yehlobo, ubusuku bumnyama kwaye isibhakabhaka sinamafu amancinci.
Ngorhatya nasemva kokutshona kwelanga kuxa ezi zibane zomlingo ziqala ukubonakala. Izibane zaseMantla (ezaziwa ngamaDanes njenge AmaNordlys) bothusa abantu bamanye amazwe, ngakumbi abo bavela kwezinye iindawo kwaye abangazange bayibone le nto ngaphambili.
Ngelishwa, ngeentsuku zesaqhwithi okanye xa kungoMvulo, phantse akunakwenzeka ukuba ungqina ngomlingo wezibane ezisentla. Ukuba kukho isaqhwithi, awuyi kuba nakho ukubona iZibane zaseNtla, njengoko isibhakabhaka sikhanya kakhulu ukuba imibala yaso ingabonakaliswa ngokuchanekileyo kwiliso lomntu.
Kwi elandelayo Ixesha levidiyo, ifakwe kwi Limfjord Ngo-2019, unokuwuqonda ngokupheleleyo amandla alo mbono wendalo:
Iindawo zokujonga ukukhanya kweNyakatho eDenmark
Nazi ezinye zeendawo ezilungileyo zokubona ukukhanya kweMntla eDenmark:
Iziqithi zeFaroe. Kwezi ziqithi zibekwe phakathi kweNyakatho yeAtlantic kunye noLwandle lwaseNorway, akukho kungcoliseka kokukhanya, okusisiqinisekiso sesibhakabhaka esicacileyo nesicacileyo sokucinga ngezibane zaseMantla ngokupheleleyo.
IGrenen Yisingasiqithi esincinci esikwindawo esemantla e-Denmark. Ukongeza kububanzi, into eyenza ukuba le ndawo ibe yindawo efanelekileyo yokujonga kukungabikho kokukhanya okungafunekiyo kwiindawo zokuhlala abantu.
IKjul Strand, ulwandle olude emaphethelweni edolophu Iihempe, ukusuka apho izikebhe ezininzi ziya eNorway.
NguSamson, Isiqithi esikwintshona yeCopenhagen kwaye saziwa ngokugcina indalo ngokugqwesileyo. Enye yezona zinto zilungileyo Iindawo zendalo zaseDenmark.
Ungazifota njani iZibane zaseMantla
Phantse wonke umntu obona i-aurora borealis eDenmark uzama ukubamba ubuhle bale nto kunye neekhamera zabo zeefoto okanye zevidiyo, bathimba umlingo ngonaphakade.
Ukuze umfanekiso ubhaliswe ngokuchanekileyo, kufuneka sebenzisa useto olude lokuvezwa. Ngamanye amagama, i-shutter yekhamera kufuneka ihlale ivulekile ixesha elide (imizuzwana eli-10 okanye nangaphezulu), oko ke kungenisa ukukhanya okungaphezulu.
Kwakhona kubalulekile sebenzisa i-tripod Ukuqinisekisa uzinzo lwekhamera ngexesha lokuvezwa.
Ngaphandle kwayo yonke into, kwaye nokuba zonke ezi vidiyo kunye neefoto zihamba kakuhle kangakanani, akukho nto inokuthelekiswa nemvakalelo yokujonga ukukhanya kweziphatho zezibane ezisemantla zijikeleza isibhakabhaka, ngaphezulu kweentloko zethu. Amava afanelwe ukonwabela ubuncinci kube kanye ebomini bakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » IAurora Borealis eDenmark